Koneriyasi Anopiwa Mweya Mutsvene | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Miskito Mixe (North Central) Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
KuKesariya kwaiva nemumwe mukuru mukuru wemasoja eRoma ainzi Koneriyasi. Kunyange zvazvo akanga asiri muJudha, vaJudha vaimuremekedza. Aibatsira varombo nevaishayiwa. Koneriyasi aitenda muna Jehovha uye aigara achinyengetera kwaari. Rimwe zuva ngirozi yakazviratidza kuna Koneriyasi ikati kwaari: ‘Mwari anzwa minyengetero yako. Saka tuma varume kuguta reJopa kuri kugara Petro, kuti vanomuudza kuti auye kwauri.’ Koneriyasi akabva atuma varume vatatu kuJopa, iyo iri kumaodzanyemba kweKesariya nemakiromita anenge 50.
Panguva iyoyo, Petro ane zvaakaratidzwa ari kuJopa. Akaona mhuka dzakanga dzisingafaniri kudyiwa nevaJudha, uye akanzwa inzwi raimuudza kuti adye. Petro akaramba, achibva ati: ‘Handisati ndambodya mhuka isina kuchena muupenyu hwangu.’ Inzwi riya rakabva rati kwaari: ‘Usati mhuka idzi hadzina kuchena. Mwari adzichenesa.’ Petro akaudzwawo kuti: ‘Pane varume vatatu vari padhoo rako. Enda navo.’ Petro akaenda padhoo achibva avabvunza kuti vaidei. Varume vacho vakati: ‘Tatumwa naKoneriyasi, mukuru mukuru wemasoja eRoma. Ari kuda kuti usvike kumba kwake kuKesariya.’ Petro akakumbira varume vacho kuti varare pamba pake. Zuva rakatevera, akaenda navo kuKesariya, pamwe chete nedzimwe hama dzekuJopa.
Koneriyasi paakazoona Petro, akabva apfugama. Asi Petro akati: ‘Simuka! Ndingoriwo munhu akafanana newe. Mwari anditi ndiuye pamba pako kunyange zvazvo vaJudha vasingapindi mudzimba dzevanhu vasiri vaJudha. Saka chindiudza zvawandishevedzera.’
Koneriyasi akati kuna Petro: ‘Mazuva 4 apfuura ndainyengetera kuna Mwari, uye ngirozi yakandiudza kuti ndikushevedze. Tidzidzisewo mashoko aJehovha.’ Petro akati: ‘Ndinoona kuti Mwari haasaruri. Anogamuchira munhu wese anoda kumunamata.’ Petro akavadzidzisa zvinhu zvakawanda nezvaJesu. Mweya mutsvene wakabva wauya pana Koneriyasi nevaya vaaiva navo, uye vese vakabhabhatidzwa.
“Murudzi rwese munhu [anotya Mwari] uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.”​—Mabasa 10:35
Mibvunzo: Nei Petro akaramba kudya mhuka dzisina kuchena? Nei Jehovha akaudza Petro kuti aende kumba kwemunhu akanga asiri muJudha?